> Resource > Video > Sida loo Laablaab MOV (QuickTime) Videos ee Mac / Windows
MOV Xabad videos dhinac iyo la yaabanahay sida loo shaandheyn 90 darajo, 180 digrii ama 270 degrees in ay dib ugu ciyaaro sida caadiga ah? The files MOV diiwaan soo baxay foorari una yaabanahay sida iyaga si aragti qumman caadiga ah? Hayso baahida loo qabo in isku shaandheyn MOV faylasha siman ama mid taagan si loo gaadho saamayn gaar ah?
Haddii aad qabtid mid ka mid ah baahida kor ku xusan, aad yimaadeen meel sax ah! Article soo socda barayaa dhowr siyaabood oo isku shaandheyn video MOV ee Mac iyo Windows:
Qeybta 1: beddesha MOV video la Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor)
Qeybta 2: beddesha MOV video la QuickTime Pro ama iMovie
Qeybta 1: Laablaab MOV video la Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor)
Wondershare Filmora kaa caawin kartaa inaad si fudud isku shaandheyn MOV video in dhawr miridh. Waxa aan taageerayn uun qaab MOV meel kasta, laakiin sidoo kale waxay kuu ogolaanaysaa inaad xaalkaa oo dhan qaabab video joogto ah oo ay ku jiraan AVI, MP4, wmv, M4V, FLV, Mpg, TOD, mod, iwm Haddii aad socda Mac ah, isticmaal uun Filmroa Wondershare u Mac (Originally Wondershare Filmroa u Mac (Originally Wondershare Video Editor for Mac)) si la mid ah loo gaaro. Hoos waxaa ku Hanuuniye tallaabo-tallaabo ku saabsan sida loo shaandheyn MOV video.
1 file MOV Import u warejin
Si aad isku shaandheyn file MOV, marka hore waxa ay dajiyaan barnaamijka adigoo gujinaya "Import" button on daaqadaha hoose. Haddii kale, waxaad si toos ah u soo jiidi kartaa jeedi file in User ee Album.
2 Laablaab video MOV ah
Ka dib markii in, jiidi file MOV ka User ee Album in track video ah Timeline ah. Markaas double waxa guji inay soo qaadaan guddi tafatir ah. Sida aad arki karto, waxaa tahay 4 fursadaha beddesha,
Wareeji MOV video 90 darajo u socoto iyo si joogto ah si aad sidoo kale isku shaandheyn karaa video 180 digrii, 270 darajo oo isku shaandheyn ku laabto booska asalka ah.
Wareeji MOV video 90 darajo anticlockwise oo joogto ah, waxay la mid yihiin Laablaab 90 darajo u socoto laakiin in an anti - jihada.
Flip MOV video gudban, yeellay.
Flip MOV video taagan, bidix ilaa midig.
Just guji badhamada kala inuu isku shaandheyn ku dhajisan ama aad MOV video. Isla markiiba waxaad ka arki kartaa natiijada xagga daaqaddii Falanqeynta bidix. Hit "celi" oo aad clip la isku beddeli doonaa jidkii uu doortay. Hadda waxaad u tagi kartaa si aad video badbaadiyo ama sii tafatirka.
3. Dhoofinta video nasiisay
Markaas waxaad riixi kartaa ee "Samee" button oo u badbaadin doonaa in file cusub ama MOV ama qaabab kale. Dhammaan qaabab video joogto ah waxaa taageera ay ka mid yihiin MOV, M4V, MP4, AVI, wmv, FLV, MPEG, iwm Kaliya dooro qaab target in "qaab" tab ah. Haddii aad rabto in aad ka ciyaari video abuurka on iPhone, iPad iyo iPod, u tag "Device" tab iyo doorasho qalab ka mid ah liiska. Waxa kale oo aad si toos ah u gali kartaa qumman videos in YouTube iyo Facebook ama gubi in DVD cajalladaha loogu daawashada TV-ga.
Video Tutorial: Sida loo Laablaab Videos MOV
Qeybta 2: Laablaab MOV video la QuickTime Pro ama iMovie
Si aad isku shaandheyn videos MOV, aad si toos ah u isticmaali kartaa warbaahinta player- gaar Apple ee QuickTime. Si kastaba ha ahaatee, in kasta oo uu ka mid ahaa in Suite ee software Mac OS X iyo sii daayay a version Windows oo lacag la'aan ah, waxaad u baahan doontaa in la gaarsiiyo in QuickTime Pro hor inta aadan edit karaa wax video gudahood ciyaaryahan warbaahinta. Ka dib markii ay dayactir, waxaad kala socon kartaa tallaabooyinka hoose si aad isku shaandheyn MOV videos aad.
1 fur file video aad QuickTime Pro
Kadib markii ay QuickTime Pro, tag "File" tab on menu barnaamijka dooro "File Open". Browse file MOV furmo pop up ka ah, dooro shayga oo guji "Open" in ay ku shuban file ee codsiga.
2 Bilow qoqobada MOV video
Dooro "Window" >> "Show Movie Guryaha". Suuqa kala pop-up A muujin doonaa guryaha la socdaan file MOV ah. Halkan guji "Video Track" Liiska iyo doortaan "Settings Visual" tab. Markaas ka heli badhamada "Flip / beddesha" qaybta "Badalka". Halkan waxaad riixi kartaa mid ka mid ah "beddesha sawirka" ama badhamada "beddesha Counter sawirka". Mar kasta oo aad riix badhanka ah, file MOV ee isku shaandheyn doonaa si waafaqsan. Marka file MOV gaaro nooca aad u jeclaystay, xir uu furmo suuqa.
3 Save the MOV video nasiisay
Markaa waa inaad aadaa "File" >> "badbaadi" moodo edit in ay file MOV iyo si joogto ah isku shaandheyn video ah.
Si loo cusboonaysiiyo QuickTime, abuurtaan si fudud ciyaaryahanka warbaahinta aasaasiga ah oo taga si ay "Help" tab on menu barnaamijka. Dooro "Buy QuickTime Pro ..." iyo raac tilmaamaha onscreen si aad u iibsato liisan software ah.
Haddii aad raadineyso oo kale si xor ah u QuickTime Pro, iMovie waa mid ka mid ah xulashooyinka lagu dabikhi karo. Waa qayb ka ah in Suite iLife codsiyada Macintosh. Halkan waa tuse faahfaahsan oo ku saabsan sida loo shaandheyn video la iMovie .
Sida loo Laablaab MOV Video Files